musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Iyo Zera reZero-Emission Aviation Startups
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Germany Kuputsa Nhau • Hurumende Nhau • nhau • Technology
Nekukura kuri kutarisa mumaindasitiri ese kuti aite shanduko yemamiriro ekunze uye kudzikisa kuburitswa kwepasi CO2, mukana wevatambi vatsva muhunyanzvi hwekubhururuka hausati wakambokura.
Nekushanduka kwemamiriro ekunze kuri kufambira mberi, matanho ari kurongwa parizvino neindasitiri yendege haakwanise. Yekudzidza nyowani mepu makumi mana anovimbisa ekutanga mumunda mutsva weyakagadzikana ndege.
Iyo pfupiso neSustainable Aero Lab mepu 40 anovimbisa kutanga, kubatanidza kuenderera kwendege munzvimbo ina tekinoroji: Sustainable Aviation Fuels (SAF), Electric Propulsion, Hydrogen, uye Dhijitari Backbone.
Inotarisawo hupfumi hwepasi rose hwekudyara mu zero-emission tech, munda wakawana kukwezva kwakakosha mumakore matanhatu apfuura, asi parizvino wanga uchinyara kubatana nebazi rezve ndege, kunyanya kana zvasvika pazvikamu zvakaoma sehydrogen .
Sustainable Aero Lab yakanangana nekumhanyisa kwekutanga uye yanga ichipa mazano ekutanga muchikamu chimwe nechimwe chakatsanangurwa muchidzidzo ichi kubva payakatangwa muna Kukadzi 2021. Dzimwe nyanzvi dzakakurumbira kubva kumativi ese eaviation dzakatobatana sevapi vemazano.
Stephan Uhrenbacher, muvambi uye CEO weSustainable Aero Lab: “Vakatanga kutariswa zvakanyanya muaerospace nguva pfupi yadarika vanga vachiita zvekufamba muchadenga uye matekisi emumadhorobha. Kunyange zvigadzirwa izvi zvinogadzira kubuda kwezvinhu zvinobhururuka uye kugutsa chishuwo chevanhu, kana matekisi emhepo kana kuisa vanhu vazhinji muchadenga kugadzirisa dambudziko rakatarisana nevekutengesa ndege: Kubhururuka kunofanirwa kunge kusisina kabhoni. Uye izvi zvinoda kuitika nekukurumidza zvakanyanya kupfuura vanhu vazhinji muindasitiri vanotenda. Inovhura nzvimbo yekutangisa kupa zvikamu zvenguva yemberi ndege kana kunyange ndege dzese, asiwo nzira nyowani dzekushanda. "
“Ndege iri kubhururuka yakanangana nedambudziko remamiriro ekunze. Asi zvakadaro mazhinji eindasitiri anotarisana nekuwedzera kudzikisa kana kudzikisira mweya, pane kuvabvisa zvachose. Hapana nguva yasara yekutora iyi nzira yekuwedzera; mhedzisiro yeshanduko yemamiriro ekunze iri kuramba ichionekwa uye ichikanganisa hupenyu hwedu hwezuva nezuva. Tinoda mhinduro dzakashinga dzinogona kuendesa emissions-yemahara yekutengesa mweya kufamba mumakore gumi anotevera kana tiine tariro yekusvika pazvinangwa zvechibvumirano cheParis. Nhau dzakanaka ndedzekuti mhinduro dzakadai dziripo uye dzinomiririra mukana mukuru wemusika, ” anodaro Paul Eremenko, CEO uye mubatsiri-weUniversal Hydrogen, uye chipangamazano muSustainable Aero Lab. Nekutanga kwake, Universal Hydrogen, yaimbove CTO yeAirbus uye yeUnited Technologies iri kuita basa rinobata pamberi pebasa iri iye.
Unogona tsvaga chidzidzo chose ne Sustainable Aero Lab, inosanganisira mepu yekutanga uye kuongororwa kweinvestment capital investments mu zero-emission tech, pawebsite yeLab www.mangoda.ro.